Ifama yasekhaya iTešnak - Arnica
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguMarjeta
UMarjeta unezimvo eziyi-126 zezinye iindawo.
Indlu yethu eneminyaka engama-200 ubudala ikwintliziyo eluhlaza yaseSlovenia, ingqongwe ziinduli ezintle. Ifanelekile kubathandi bendalo, abathanda ukukhwela intaba kunye nokukhwela ibhayisekile kunye nabantu abonwabela uxolo noxolo. Ehlotyeni siyindawo egqibeleleyo yokuchitha ixesha kwindalo kunye nokutyelela eyona ndawo idumileyo yaseSlovenia efana nechibi iBled & Bohinj, ikomkhulu iLjubljana, umqolomba wePostojna kunye nenqaba yasePredjama, unxweme lwaseSlovenia, intlambo yaseTrenta... Wamkelekile kwaye uzive ekhaya!
Igumbi iArnica lelinye lamagumbi ama-4 kwikhaya lethu. Ungafuna kwaye ufumane ikhusi lomzimba nomphefumlo wakho. Ungasonwabela isidlo sakusasa sasekhaya kwaye uthathe inxaxheba kwiindibano zocweyo ezahlukeneyo zokuyila. Sinqwenela ukuvuselela impembelelo entsha, uvuyo kunye nomdla kuwe.
IHomestead Tešnak ime kumda welali encinci iHotavlje, ijikelezwe yimithi, ithafa kunye nomlambo. Kuzolile kwaye kuzolile.
Umbuki zindwendwe ngu- Marjeta
Usapho lwethu luhlala kwindlu elandelayo. Siyakuthanda ukudibana neendwendwe zethu kwaye sazane nawe. Ukuba unqwenela ukuba nendawo yabucala kunye nokuzola, sikunika indawo kwaye siyafumaneka xa kufuneka.